Vola Mahasoa sy FDA: nifanaraka hahazoan’ny tantsaha mindram-bola | NewsMada
Vola Mahasoa sy FDA: nifanaraka hahazoan’ny tantsaha mindram-bola
Olana hatramin’ny ela ny tsy fahazoan’ny mpamboly famatsiam-bola. Tsy araka ny dokambarotra misy ao amin’ny banky sy ny fampanantenan’ny mpamatsy vola lehibe ny zava-misy. Matetika, miveri-maina ny tantsaha, raha mitady fampindramam-bola any amin’ny banky mahazatra. 3 na 4 % monja ny tantsaha mahazo fampindramam-bola. Tsy omena tsiny koa anefa ireo mpamatsy satria tsy misy antoka mazava izay fampindramam-bola izay.
Ny volana oktobra lasa teo, nifanaraka ny Vola Mahasoa sy ny FDA (Fonds de développement agricole) ho amin’izany famatsiam-bola izany. Hatsaraina sy hampitomboina ny fomba hahazoan’ireo tantsaha fampindramam-bola, araka io fifanarahana vaovao vita io. Miankina amin’ny tetikasa aroson’ny mpangataka ny fahazoana izany, araka izay nofaritan’ny FDA ihany koa.
Niarahan’ny roa tonta nifanaraka ny mety hahazoana fampindramam-bola mitohy sy ny fiantohana ny volan’ny mpampindrana. Anisan’ny sarotra indrindra io fiantohana io any amin’ireo vondrona mpampindram-bola madinika (IMF)*. Olana iray hafa mampikatso ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana ny maha ambony loatra ny zana-bola alain’ireo IMF ireo. Manodidina ny 22 % ny salanisa amin’izany zana-bola izany, nefa azo ahena hatrany amin’ny 5 na 6 % raha be indrindra, araka ny fanamarihan’ny mpiasa sasany ao amin’ireny IMF ireny ihany.
Tsy voateny momba izay zana-bola izay eo amin’ny fifanarahan’ny Vola Mahasoa sy ny FDA. Misy amin’ny faritra 15 izao ny FDA, kendrena ho tratra ny faritra rehetra mialoha ny taona 2020. 35 miliara ariary ny fampindramam-bola avy aminy hatramin’izay.